Iindaba - Dongguan Tuoyuan Precision Machinery Co. LTD.
Iimfuneko zobuchwephesha zamalungu omatshini kunye nezinto
Ngaba awazi ukuba yintoni intloko yentloko?
Intloko yeAngle sisixhobo somatshini esisetyenziswa ngokuxhaphakileyo. Emva kokuba intloko ye-engile ifakelwe kwisixhobo somatshini, umgca wokujikeleza wesixhobo unokujongwa nge-spindle ujikelezo lomgca weziko lokuqhubekeka nomsebenzi.
Iimpawu zokusebenza kunye nokuhamba komsebenzi kumatshini wokugaya we-gantry
Umatshini wokugaya we-Gantry unobunzima obaneleyo, ukusebenza kakuhle, kulula ukusebenza, isakhiwo esilula, ukusebenza ngokubanzi kunye nezinye iimpawu.
Ukulungiswa komatshini wokugaya weGantry
Ukulungiswa kwesikhokelo somatshini weGantry: isikhokelo sesixhobo somatshini ubukhulu becala senziwe ngentsimbi okanye ngentsimbi, olu hlobo lwesikrweqe sesikhokelo, kufuneka silungiswe, kungenjalo siyakukrwela.
Malunga noomatshini bokugaya beGantry
Umatshini wokugaya we-Gantry, omfutshane kukugaya i-gantry, isakhelo somnyango kunye nebhedi ende ethe tyaba yomatshini wokugaya.
Ungawugcina njani umatshini wokugaya we-gantry
Umatshini wokugaya we-gantry uqulethe i-gantry, i-gantry inekholamu ephindwe kabini, umqadi, umqadi wokubhola, umqadi wophahla, i-canopy kunye ne-milling head ram zenza isakhiwo esiqinileyo.